Axmed Madoobe oo ka horyimid isbaheysi siyaasadeed oo ay qorsheynayeen madaxdii ka qeybgashay caleema saarkiisa. | Somsoon
Home WARAR Axmed Madoobe oo ka horyimid isbaheysi siyaasadeed oo ay qorsheynayeen madaxdii ka...
Axmed Madoobe oo ka horyimid isbaheysi siyaasadeed oo ay qorsheynayeen madaxdii ka qeybgashay caleema saarkiisa.
Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) Madaxweynaha maamulka Jubbaland ayaa qaadacay sida xogta aan helnay shir la doonaya in lagaga hadlo xaalada guud ee dalka iyo sidoo kale isbaheysi gaar ay doonayeen in magaaladaasi ay kaga dhawaaqaan madaxdii ka qeybgashay xafladii lagu caleema saaray madaxweyne Axmed Madoobe.
Shirar gaar gaar ah oo u socday madaxdaas maalmihii lasoo dhaafay ayaa sida qorshoodu ahaa in Kismaayo ay ka iclaamiyaan isbaheysi siyaasadeed oo ay ku mideysan yihiin,laakiin madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa taasi diiday kana codsaday madaxdaas oo ay kamid yihii madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh iyo Shariif Sheikh in kaliya caleemasaarka lagu ekaatado.
Madaxweyne Madoobe ayaa si xogta aan ku helnay soo jeediyey wixii wadahadal iyo qorshe siyaasadeed ku aadan in xarunta dalka ee Muqdisho lagu faaqido, waxaana uu intaasi raaciyey in Kismaayo uusan doneynin ay noqoto magaalo laga naqdiyo dowlada dhexe ee Soomaaliya.
Inta badan wafuudii ka qeybgashay xafladaasi ayaa maanta lagu wadaa in degaanadii ay ka yimaadeen ay dib ugu laabtaan,waxaase mar uu warbaahinta la hadlay Madaxweyne Madoobe waxa uu soo jeediyey in wadahadal loo furo maamulkiisa iyo dowladda federaalka.
Article horeQM oo sheegtay in ay korortay tirada Haweenka iyo Caruurta ay askareyaan Al-Shabaab.
Article socoda Sawirro:-Safiirkii ay Dowladda Soomaaliya u magacaawday Suudaan oo warqadihii safiinimo …